Ngamaxesha onke, izipho ezenziwa ngezandla zazo zazingconywa kakhulu. Ngezihlandlo ezahlukeneyo zobomi, izipho ezinjalo zinexabiso elihlukile leendleko. Ngokuqinisekileyo kwi-kindergarten ngamnye umntwana wayesebenzisa izipho kumama noyise ngoMatshi 8, ngoFebruwari 23, uNyaka omtsha kunye nezinye iholide. Ezi zipho zivame ukuba zenziwe kwizixhobo eziphuculweyo kunye phantsi kolawulo oluqinileyo lootitshala. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukwenza isipho kumntu oyintanda, mlingane, kufuneka ubonise ukucinga okungakumbi kwaye uchithe imali ethile. Okubaluleke kakhulu isipho kwiSuku saBathandi bonke. Masibe sisipho esenziwe ngezandla zakho ngothando.
Isipho esilungileyo seSonto sikaValentine siza kuba ngeengelosi, oza kuthunga ngezandla zakho. Imifanekiso yeengelosi iza kuthwala amandla oya kubahlawula. Bakukugcina kunye nomthandayo, kunye nothando lwakho. Ukuze wenze isipho esilungileyo, uya kuyidinga: inkcazo yengcamango yakho, intambo, ubuhlalu kunye nemicu. Ingubo ofuna ukuyinquma ithole lezithunywa zezulu, intambo - ukwenza iinwele, ubunzima emehlweni, kunye nemicu yokubetha izithunywa zezulu, uze udibanise imisindo yazo kunye noxolo. Kucetyiswa ukuba wenze amaphiko, ngenxa yoko unokuthatha inxalenye encinane ye-organza okanye enye intambo yokukhanya, kunye nentambo yokwenza amaphiko. Ukuba ufuna ukumncoma intanda yakho ngobulumko bakho, unokwenza iipokethi ngamaphiko. Kule ngxowa ungafaka isipho esiphezulu, umzekelo, ukubhalisa kwi-gym okanye iitikiti zomdlalo weqela lakho elithandayo.
Izipho zintanda yakho kwiSuku lweValentine, ezenziwe ngezandla zakho, zimangalise ngokungafani kwazo. Into ebalulekileyo kwisiphi na isipho esifanelekileyo kufuneka ibe yintetho yakho. Kwenzekile ukuba uphawu oluyinhloko luthando lwentliziyo kunye nazo zonke izikhumbuzo zeli fomu. Ngoko sebenzisa lo mgaqo xa wenza isipho. Unokuwutyalela imithwalo emibili ngesimo senhliziyo. Ukwenza oku, kuyinqweneleka ukuthenga iimfate zezinto ezikhethiweyo, umzekelo, i-velvet. Ukusuka kuyo, gcoba iintliziyo ezimbini. Thatha kwakhona i-organza kwaye udibanise kuyo i-pillowcases ephuculwe yimizi yakho. Ukuba unako kwaye unqwenela ukukhanda, okanye unomshini wokuthunga ngomsebenzi wokugcoba, ufake umgca phezu kwegama lakho igama negama lathandekayo. Iipillowcase zibeka imilenze. Ngaphakathi kwe-pillowcase, kulo mzekelo, unokubeka esinye isipho, umzekelo, amanzi angasese, i-kitting shaving, njl njl. Isipho eso asiyi kuba yinto emnandi kakhulu, kodwa nento efanelekileyo yokusebenza: emkhombeni, intanda yakho iya kulala ngokulala, okanye Yisebenzise njengenxalenye yefenitshala enhle.
Ukuba uhlala kunye nomthandane wakho, mnike ingaphakathi yothando: uhombise igumbi lakho lokulala ngentliziyo. Sula intliziyo enkulu, yenze i-pocket eyimfihlo, apho ufihla isipho.
Njengoko uyazi, abapheki abakhulu kwihlabathi ngabantu. Ukuba le yimeko yakho kwaye indoda oyithandayo uyayipheka, yenze ibe yinto enhle ifakwe kwimo yentliziyo. Ukuze uzenzele, uzakufuna, okokuqala, iingubo, isiqwenga sokubetha, ubhondi bokuhlela. Kusuka kwinqayi ofuna ukuyifaka iinkcukacha ezibini ngesimo senhliziyo. Ukwenza oku ngokucophelela, qalela kuqala intliziyo evela kwiphepha lokuqala, kwaye unamathele kwisitya uze uyijikeleze. Iinkcukacha ezinjalo zidinga iziqendu ezimbini. Siwabeka kwicala elingalunganga komnye nomnye, kufuneka sibeke ukubetha phakathi kwabo, sinqunywe ngendlela efanayo. Sew u msebenzi. Emva koko thunga i-tack kunye ne-tape uze wenze i-loop. Unako ukuthunga kwi-applic.
Kubalandeli bokufunda, unokwenza isembozo sencwadi. Unokuthatha incwadi yakho oyithandayo endleleni ngaphandle kokwesaba ukungcola. Ukuze wenze isembozo sencwadi, kungcono ukuthatha iingubo ezinzima. Vula ixande. Kulo ngaphantsi kufuneka uguqe imiphetho, eya kuba ngamapokethi. Gcoba ezi zikhuni, uze uphendule ikhava ebusweni bakho uphinde ubonce ngaphezu kwendwangu. Esi sikhokelo sinokuhlotshiswa nge-embroidery ngesandla. Umfanekiso unokukhethwa ngokwazo - iintliziyo, imibhalo enhle. Kule meko, imbobo kufuneka iyenze kwangaphambili, ngaphambi kokuthunga - ngoko kuya kuba lula ngakumbi ukwenza umhlobiso wekhava. Unokwenza ibhukumaka kwisikhuselo. Ukumakisha okubhaliweyo kulula kakhulu. Ukwenza oku, kufuneka kwakhona ufumane ixande. Ngaphakathi kwithebhu, kuyinqweneleka ukufaka isiqwenga seplastiki (ungathatha kwiifolda ezingadingekile), eziza kunika ibhukumakethi intsingiselo efunwayo. Hlonga ibhukumaka enokuyithandayo.
Ukongeza kwizipho ezinjalo zomsebenzi, unokwenza isilungiselelo sothando, okuqinisekileyo, esiya kubangela isithwathwa sengqondo kumthandi wakho. Bhala umyalezo omthandayo kwiphepha elihle. Ngaphambi koko, cinga ngesicatshulwa somyalezo ukuze siyibaleke isiqabane sakho.
Ukongeza, unokwenza umhlobo wakho kwiSonto likaValentine ngokwakho. Thenga iingubo zangaphantsi ezintle, i-negligee, yakha yangaphakathi efanelekileyo: uyihobise igumbi, ukhanyise ikhandlela, ulungiselele isidlo sothando. Ngaphambi kokufika komntu othandekayo, gqoka iingubo zangaphantsi ezithengiweyo, sebenzisa umyeni wakho oyintandokazi (umfana), unamathele ibhendi ebomvu.
Abantu abahlala ndawonye iminyaka emininzi baya kuthandana ukutshintshanisa imilayezo yothando. Ngokuqinisekileyo ngexesha lobudlelwane wabhala omnye nomnye unobumba (i-SMS). Ngoko kutheni ungavuseleli esi siko esihle. Kwiphepha elihle bhala umbhalo-isibhengezo sothando. Kungcono ukuba ubhale itekisi ngesandla ngesandla sokubhala ngesandla esihle.
I-Valentine iyimpawu ebalulekileyo.
Ingcamango eyinqobo kakhulu - iigentina ngokuvuma. Thenga ezininzi iigentines, apho ubhala yonke into, othanda ngayo iqabane lakho ebomini. Hlanganisa ezi postcards kulo lonke igumbi. Umthandayo uya kubafumana kwiindawo ezingalindelekanga, kwaye oku kuya kumnika uvuyo olukhulu.
Ukuba uyayithanda kakhulu imisebenzi yezandla, fakela umfanekiso obala. Ibali li sekelwe kwizinto ezikhethwa ngumntu othandekayo. Nangona uhlala udibanwe esikolweni, inani elikhulu leenzuzo zolu hlobo lomsebenzi wentshontshi liya kunceda ukwenza uboya obuhle kunye nobuhle.
Izipho ezenziwe nguwe, zityhila ukuzaliseka kweemvakalelo zakho neemvakalelo uze unike umfudumalo. Ezi zipho zenziwe ngomphefumlo kwaye zithwala amandla amandla kuphela.
Imifanekiso yoSuku lwe-Valentine ka-2018: ehlekisayo, ngokuvuyisana-imibhalo
Amanyathelo omthonyama e-sclerosis
Ubomi bomntu womculi uJasmine
Ukuba umntwana uyaba nokuhlala ngaphandle komama
Amaqanda atsiweyo ehovini
Imigaqo yoyilo lwe-wardrobe
Ngomoya wasendulo: isongo sikaHermes Delos
URosey Huntington-Whiteley - ukuphakama kweenkwenkwezi zaseHollywood
Amaqabunga e-Sea buckthorn